Iphupha lokubonakala lifile Discover ➡️ Discover Online ▷ ➡️
Ukuphupha ngathi ubhubhile. Ngaba uyafuna ukwazi ukuba athetha ntoni amaphupha akho? Namhlanje sabelana ngesi sikhokelo nawe ukuze wazi okungakumbi malunga nesi sihloko.
Kwixesha elidlulileyo, abantu babengenazo iindlela zonyango esinazo namhlanje. Oogqirha bajongene nemiceli mngeni emininzi, kubandakanya nokuseka ukufa. Iindlela ezahlukeneyo zazisetyenziselwa ukumisela ukuba umntu ubonakala eswelekile okanye akasaphili na.
Oku kubandakanya uvavanyo lwesipili, apho ubambe isipili emlonyeni nasemmpumlweni ukuze ubone ukuba inkungu iphefumla. Ngamanye amaxesha kwakusetyenziswa iintsiba okanye amakhandlela, okanye oogqirha babeka ingqayi ezaliswe ngamanzi esifubeni sesigulana. Ukuba amanzi ebefuduka, isiguli besiphila.
Ngethamsanqa, ngoku zikho iindlela ezinokuthenjwa zokumisela ukufa komntu. Ukufa okubonakalayo okubonakalayo kunokuqhubeka nokufumana amaphupha ethu njengophawu. Kodwa, kunokuthetha ntoni ukuba namhlanje siphupha ngathi sifile?
1 Uphawu lwephupha "lubonakala lufile" - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha "lubonakala lufile" - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha "lubonakala lufile" - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha "lubonakala lufile" - ukutolikwa ngokubanzi
Nabani na ozenza ngabom ngathi ufile kwimeko yamaphupha uzama, ngokoluvo ngokubanzi, ukubaleka kwi ingxaki. Umntu ochaphazelekayo ukwinqanaba lokukhubazeka ebomini. Ayinakho ukuqhubela phambili. Uphawu lokufa okubonakalayo lukubiza ukuba utshintshe into kwaye ungoyiki mingeni kwakhona. Ubunzima abuyi kuhamba ngokwabo, kodwa kuya kufuna ukubandakanyeka okusebenzayo. Oku kuyinyani ngakumbi kwindawo yokunxibelelana.
Ngamanye amaxesha uphawu "lubonakala lufile" ephupheni linokuthetha u-a amava buqu okanye ufumane ulwazi. Oku kudala ungquzulwano lwangaphakathi olufuna ukwamkelwa nokusonjululwa. Kule meko, iphupha likucela ukuba utshintshe indlela ocinga ngayo.
Iphupha apho kubonakala ngathi ufile kwaye ekugqibeleni wangcwatywa ephila kunika ingqiqo yokwenene ukunciphisa. Umntu ekuthethwa ngaye ubambekile kwimiba yobomi bemihla ngemihla, akaboni ndlela yakuphuma, akasenakho ukukhula ngokukhululekileyo.
Omnye umntu, obonakala ngathi ufile ephupheni kwaye osenokuba sele esemakhazeni, ukwalumkisa ukuba angangxami aphelise ungquzulwano. Inyaniso yokuba omnye umntu akasathethi kwanto ngomlo obukho apho akuthethi ukuba sele bewulibele kwaye yonke into ilungile kwakhona. Kunokuba luncedo ukujonga kwakhona kwingxoxo ecacisayo.
Uphawu lwephupha "lubonakala lufile" - ukutolikwa kwengqondo
Ukutolikwa kwamaphupha ezengqondo, ukubonakala kokufa kubhekisa kukungabikho imvakalelo yokuba noxanduva. Umntu ekuthethwa ngaye usenokuzama ukuwuphepha lo mbandela. Awunaxanduva lokuziphatha kwakho kwangaphambili.
Ngophawu "olubonakala ngathi lufile", i-subconscious yakho ikubuza ukuba uthwale iziphumo kwaye uthathe uxanduva.
Ukubona omnye umntu obonakala ngathi ufile, njengendoda endala engahambiyo, kukwalumkisa iziphumo. Ngokwe-psychoanalysts, amaphupha athambekele ekuboneni izinto ngokungalunganga kunokuba kunjalo.
Uphawu lwephupha "lubonakala lufile" - ukutolika kokomoya
Ngokwolu toliko lokomoya, uphawu "lubonakala lufile" lumele umnqweno walowo uchaphazelekayo.